याकूब ३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उज्बेक उन्डुबेली उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जाभानिज जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डेनिश ताजिकी तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली निआस नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोनापियन पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन
३ हे मेरा भाइहरू हो, हामीमध्ये धेरै जना शिक्षक नबन्नु नै बेस, किनकि परमेश्वरले अरूहरूको भन्दा हाम्रो अझ कठोरतासित न्याय गर्नुहुन्छ भनेर हामीलाई थाह छ। २ किनकि हामी सबै जना धेरै चोटि चुक्छौं।* यदि कोही आफ्नो वचनमा चुक्दैन भने ऊ आफ्नो सारा शरीरमा लगाम कस्न सक्ने सर्वगुणी मानिस हुन्छ। ३ हाम्रो आज्ञा मानून्‌ भनेर हामी घोडाहरूको मुखमा लगाम लगाउँछौं र त्यसो गर्दा तिनीहरूको पूरै शरीरमाथि पनि काबू पाउँछौं। ४ हेर, तेज बतासले हाँक्ने ठूलठूला जहाजहरूलाई समेत नाविकले एउटा सानो पतवारको सहारा लिएर आफ्नो इच्छाअनुसार जता मन लाग्छ, त्यतै लैजान्छ। ५ त्यसैगरि, हाम्रो शरीरको एउटा सानो अङ्ग भएर पनि जिब्रोले कत्ति ठूलठूलो कुरा गर्छ। हेर, बडेमानको जङ्गलमा डढेलो लगाउन आगोको सानो झिल्का मात्र भए पुग्छ! ६ जिब्रो पनि आगै हो। हाम्रो शरीरका अङ्गहरूमध्ये जिब्रो एउटा त्यस्तो अङ्ग हो, जहाँ खराबीको दुनियाँले नै बास गरेको हुन्छ। किनकि त्यसले सारा शरीरभरि दाग लगाउँछ र जीवन-चक्रमै आगो झोस्छ अनि गेहेन्नाको* आगोले जस्तै गरी त्यसलाई भस्म गर्छ। ७ हरकिसिमका जङ्गली जनावरका साथै चराहरू, भुइँमा घस्रने जीवहरू अनि समुद्री जीवहरूलाई तह लगाउन सकिन्छ अनि मानिसहरूले तिनीहरूलाई तह लगाएका पनि छन्‌। ८ तर जिब्रोलाई भने कुनै मानिसले तह लगाउन सक्दैन। त्यो खतरनाक अनि काबूमा राख्न नसकिने अङ्ग हो र त्यो ज्यानमारा विषले भरिएको हुन्छ। ९ त्यही जिब्रोले हामी यहोवा, हाम्रो बुबाको प्रशंसा गर्छौं अनि त्यही जिब्रोले हामी “परमेश्वरको स्वरूपमा” बनाइएका मानिसहरूलाई सराप्छौं। १० एउटै मुखबाट प्रशंसा र सराप दुवै निस्कन्छ। हे मेरा भाइहरू हो, यस्तो भइरहनु उचित होइन। ११ के एउटै मुहानबाट मीठो र तीतो पानी निस्कन्छ र? १२ मेरा भाइहरू हो, के अन्जीरको रूखले जैतुन वा दाखको बोटले अन्जीर फलाउन सक्छ र? त्यसैगरि, नुनिलो पानीको मुहानबाट मीठो पानी निस्कन सक्दैन। १३ तिमीहरूमध्ये बुद्धिमान्‌ अनि समझदार को छ? उसले बुद्धिमार्फत प्राप्त हुने नम्रताका साथ आफ्नो असल चालचलनद्वारा आफ्नो काम देखाओस्। १४ तर तिमीहरूको मनमा कटु ईर्ष्या अनि वैमनस्यता छ भने घमन्ड गर्न र सत्यविरुद्ध झूट बोल्न छोड। १५ त्यस्तो बुद्धि माथिबाट आउने बुद्धि होइन तर सांसारिक, पाशविक अनि सैतानी बुद्धि हो। १६ किनकि जहाँ ईर्ष्या अनि वैमनस्यता हुन्छ, त्यहाँ गोलमाल र हरकिसिमका खराब कुराहरू हुन्छन्‌। १७ तर माथिबाट आउने बुद्धि पाउने मानिस सर्वप्रथम पवित्र हुन्छ, त्यसपछि शान्तिप्रिय, व्यावहारिक र आज्ञाकारी हुनुका साथै ऊ कृपा अनि असल फलहरूले भरिपूर्ण हुन्छ र उसले कुनै किसिमको भेदभाव अनि ढोंग गर्दैन। १८ यसबाहेक, जसले शान्ति कायम गर्छ, उसले शान्तिपूर्ण अवस्थामा त्यसको बीउ छर्छ र त्यसबाट असल फल बटुल्छ।
^ या ३:२ * शाब्दिक, “ठक्कर खान्छौं।”
^ या ३:६ * यरूशलेमबाहिर फोहरमैला जलाउने ठाउँ। अतिरिक्त लेख ९ हेर्नुहोस्।